Zokushisela apharathasi "Resanta AIS-250" yakhelwe imanuwali arc Welding esebenzisa electrode uhlobo camera. Ukuthuthukiswa kwe-inverter ubelokhu inkampani efanayo elise Latvia. Ukubuthanela umshini Welding wenziwa North Korea, njengoba kubonakala izinga layo: zonke izingxenye ukulingana kahle, akukho izikhala, squeaks kanye nezinye izinkinga.
Isimiso ezisebenza umshini Welding
Umsebenzi oyinhloko Welding inverter "Resanta AIS-250" - ukuguqulela kushintshana zamanje nge imvamisa 50 Hz ukuqondisa zamanje, lapho voltage ifinyelela ukubaluleka 400 V Shirokoimpulsnaya modulated ephezulu imvamisa voltage ekhiqizwa ivumela amadivayisi ezinjalo ukuze ulungise zamanje Welding.
Ngaphambili samajaji amahlanu oMkhandlu bezinhlamvu metallic "Resanta AIS-250" amandla nezixhumi abekwa. Lezi LED axhunyiwe, esebenzisa okuyinto kulawulwa nemingcele zenethiwekhi kanye ngokubonisa okweqile kudivayisi, Welding wire futhi isilawuli ukhetha ukubaluleka wamanje Welding.
Invertor "Resanta AIS-250" usuphothuliwe ngo ophoqelelwe ukupholisa isistimu ukuthi amaphi okukhiphayo kusukela icala iyunithi ngokusebenzisa izimbobo umoya oshisayo. Zokushisela apharathasi thembeke evikelwe okweqile ngesikhatsi kokuhlinzwa ngenxa ezifana uhlelo isivikelo esifanele.
Engeziwe uhlelo Ukuvikelwa amvalele ngokuzenzakalelayo umshini Welding uma kwenzeka kuvalwe izintambo amandla nomunye. Mayelana nalesi ingozi umsebenzisi uxwayisa isibani ekhethekile isixwayiso ikhanyisa ku iphaneli sensimbi.
Izici ezikhethekile inverter
Ukuphumelela and lula ukusetshenziswa "Resanta AIS-250" kuyinto imisebenzi kubangelwe ezimbili ezibalulekile: "Zezıhlabane Qala" futhi "Antizalipanie".
I ukuthungela we kagesi arc UWelder sibonga leso ukuze umsebenzi wokuqala ukuba kwenziwe ngabantwana sithuthukise ngokuzenzakalelayo ngamandla wamanje Welding, okwenza kungabi izinyathelo ezengeziwe. I "Antizalipanie" kwehlisa ngokuzenzakalela wamanje Welding ngesikhathi adhesion we electrode kwamanzi metal by arc luvutha. Ngemva ukuqedwa enjalo ababambelela amandla inverter kwandisa wamanje nenani isethi. Bobabili imisebenzi ziwusizo kakhulu futhi kulula ukusebenza, okuyinto kuqinisekiswa ngakwesokunxele ngu umshini Welding "Resanta AIS-250" ukubuyekezwa.
Zokushisela apharathasi ukusetshenziswa yasendlini, kusukela uhlelo "Resanta AIS-250" kanye nomklamo ukuqinisekisa ukusebenza onokwethenjelwa futhi ephephile ngisho wonkana voltage yokwanda kwama kanye spikes. I inverter ivumela imanuwali arc Welding, ngisho e-voltage ubuncane.
I ububanzi esiphezulu we electrode angasetshenziswa lapho esebenza "Resanta AIS-250", kuyinto 6 mm. Amandla lwamanje ngokomthetho ngaphakathi anhlobonhlobo, kodwa mkhawulo 250 A. umshini Welding kungaba ngokuhamba kwesikhathi ukumelana imithwalo okusezingeni eliphezulu ngenxa Ukuvikelwa uhlelo. izici zayo inverter "Resanta" Bypasses onobuhle eziningi ezifanayo imishini Welding kuyatholakala emakethe.
Voltage inverter e kungekho-load msebenzi 80 W. eyakhelwe transistors IGBT uchungechunge isiqinisekiso impilo ende inkonzo Welding umshini ngisho noma ukusetshenziswa yakhe njalo ngesikhathi imithwalo eliphezulu. izinga lokuvikeleka kule imodeli inverter - IP21.
Mobility futhi compactness "Resanta AIS-250" kusiza kakhulu ukusetshenziswa kwayo. Isibambo elula esisogwini ebiyelwe inverter ikuvumela ukuba ngokushesha futhi kalula ihambise bengonozulane emhlabeni site umsebenzi. Izibuyekezo "Resanta AIS-250," kusho i ngokunemba kanye kalula nokulungiselela kwazo zonke izinhlaka. Buhle kudivayisi wukuthi ngisho ne yokwanda kwama abalulekile zonke izilungiselelo zihlala zinjalo.
I inverter has nemingcele ezilandelayo lobuchwepheshe:
Ukusebenza kwe-Welding iyunithi kungenziwa eziqhutshwa at lokushisa kusuka -10 kuya +400.
Umkhawulo ukubaluleka ukusetshenziswa wamanje - 35 A.
Ukulungisa ukusebenza Welding zamanje wenziwa ngaphakathi 10-250 A.
Voltage we arc ezakhiwe inverter kwalesi imodeli 30 V
Zokushisela apharathasi usebenza njengothisha ovela eyodwa inethiwekhi kagesi kanye umthamo uphethiloli generator okungenani 5 kW. Uma ukhetha electrode kwabashiselayo kufanele inake yokuthi sinciphise ubukhulu wamanje Welding nge nokuncipha voltage input.
Lungiselela idivayisi ukusebenza
Lungiselela inverter "Resanta AIS-250" emsebenzini ilula - udinga ukuba banamathele thize yezenzo ukuze kuvinjelwe izimo eziphuthumayo. Iyunithi yokuqala ixhunywe wire isisekelo kanye lokususa conductive nomphathi we-electrode. Ngemva lokhu ukusetha eliphansi wamanje Welding usebenzisa ikhanda. I inverter ixhunywe amapayipi futhi waqala kuphela ngemva lezi zenzo.
Esikhathini imfundo manual umshini Welding nomkhiqizi ikhombisile amandla lamanje ezidingekile uhlobo oluthile electrode.
Ngemva kokuphothulwa yonke imisebenzi Welding ku inverter futhi embukisweni esiphansi Inani lamanje ke idivayisi sivaliwe futhi inqanyuliwe amapayipi. I izintambo Unqanyuliwe kulezi idivayisi kuphela emva de-umdlandla.
Ukuphepha ngesikhathi ukusebenza imishini Welding
Inverter ngaphambi kokusetshenziswa, kuyinto efiselekayo amahora ambalwa basishiye ezingeni lokushisa omuhle. Lokhu ukuqaphela uyogwema kumiswa ukufingqa kule divayisi, okungase kubangele short circuit. Ngaphezu kwalokho, isidingo ukuqapha ubuqotho ukwahlukanisa ikhebula Welding kanye wiring. Ukulimala ungqimba ukwahlukanisa akuyona kuphela kuphambene nezidingo zokuphepha, kodwa futhi babekwazi kubangele okukhipha ukwehluleka kudivayisi.
Sebenzisa inverter "Resanta" akukwazi emagcekeni, lapho imisebenzi, ephelezelwa ukwakheka swarf nothuli. inclusions okunjalo ungathola ngaphakathi ocingweni bese umonakalo. Futhi, inverter ayikwazi ukusetshenziswa ngaphandle ngesikhathi kwezulu noma amakamelo nge umswakama high.
Lapho ukusebenza imishini Welding, kuyinto efiselekayo ukulandela imithetho embalwa eyisisekelo:
Indawo okuzokwenziwa kwenziwe umsebenzi Welding kumele kahle umoya futhi ukufinyelela umoya ohlanzekile.
Qiniseka ukuba acabangele imithetho yokuphepha umlilo.
Ngesikhathi kokuhlinzwa, qiniseka ukusebenzisa izingubo ezivikelayo, Welding buso, isigqoko kanye amagilavu obukhulu. Lezi zimali kuzokusiza ukuvikela isikhumba sakho namehlo ukusha.
Imigomo isitoreji inverter
Welders kufanele agcinwe nezimiso ezithile. Ikamelo lapho kuyoba khona inverter, akumele kuqukethe evala of acid kanye alikhali, esiningi uthuli nezinye ndaba okwesikhashana. Umshini Welding kumele agcinwe ezimweni ezihlangabezana nezidingo ezilandelayo:
I lokushisa kuma kufanele ibe uhla -10 kuya +50 degrees Celsius.
Izinga umswakama emoyeni ambient - singadluli 80%.
Kungenzeka yini ukuba umuntu azimele ukulungisa Welding inverter?
Futhi ochwepheshe basekhaya nabamazwe angaphandle uthi inkonzo nokuphila enkulu umshini Welding "Resanta AIS-250." Active inverter operation kuhambisana ukuphepha zonke izidingo ezifanele niqhubeke iminyaka, kodwa, njenganoma iyiphi enye ubuchwepheshe, idinga njalo.
Kuyaphawuleka ukuthi bobabili yesondlo engahlelelwe futhi zokuvimbela imishini abanjalo kungcono uthemba ochwepheshe. Ukugcina imishini Welding yalesi brand bekwi workshop eziningi ogunyaziwe. Nokho, ukulungiswa elula, umsebenzisi ongenza bebodwa.
ukulungiswa okunjalo abazenzi avame ezimweni lapho inverter overheats, yini imibiko esisogwini aphambi komtshina. Ukuphungula le nkinga kalula - ngokwanele ukuhlanza ebusweni engaphakathi umshini Welding kusuka ukungcola nothuli.
Kubi, abampofu ukusebenza Welding inverter, amandla sinciphile kungenzeka ukuthi umataniswe nge-low voltage inethiwekhi kagesi, noma usebenzisa i-ezimanzisa electrode. Inkinga amandla phansi idivayisi, ezihlobene electrode eluhlaza kungaba kalula futhi ngokushesha: isidingo ngokuphelele ome yonke electrode.
Cleaner wezindlu Vitek VT-1833: incazelo, ukuhlunga kanye nokubuyekeza of the abanikazi